Itheyibhile yokuSebenza yeMechnical
Itafile yokuSebenza yeGynecological
Itafile yokuSebenza kwamehlo
Itafile yokusebenza enamacandelo emodyuli
Itheyibhile yokusebenza yeemodyuli yakhulelwa, yayilwa kwaye yakhiwa ngeenjongo zokwanelisa iimfuno zokulula kunye nokuguquguquka ngoku kubaluleke kakhulu kuwo onke amacandelo otyando. Ulawulo lwe-Electrohydraulic yentshukumo ebaluleke kakhulu, ngokuzilinganisela kunye nenqanaba lokusebenza ...
Itheyibhile yokuSebenza ngeNdawo
Uninzi lwamazwe kunye nemimandla emhlabeni ikwixesha loxolo, kodwa kusekho ukungqubana okuncinci phakathi kwamazwe ambalwa. Umzekelo, Imfazwe yakutshanje yamaPalestine namaSirayeli. Kwizibhedlele zedabi kwimimandla yasemkhosini, izixhobo zonyango ezisebenzayo neziphathekayo ziyafuneka. Amajoni awayezimisele ...
Ngaba ilayini yokuSebenza yokuKhanyisa ayinakufakwa kwigumbi OKANYE elinobude obukumgangatho osezantsi?
Xa abathengi bamanye amazwe besithi andikaze ndithenge ukukhanya kwakho kokusebenza, ngaba umgangatho wayo unokuthenjwa? Okanye ukude kakhulu kum. Kufuneka ndenze ntoni xa kukho ingxaki esemgangathweni? Konke ukuthengisa, ngeli xesha, kuya kukuxelela ukuba iimveliso zethu zezona zibalaseleyo. Kodwa ngaba uyakholelwa ngokwenene? Njengengcali ...
Ukuphuculwa kweMveliso yeNgalo eyandisiweyo
Imveliso, kuphela ngokuhlaziya rhoqo, abathengi banokuba namava angcono omsebenzisi. Ngokwengxelo yomsebenzisi kunye nokwaziswa kwetekhnoloji entsha, siphucule ingalo eyandisiweyo (ingalo ejikelezayo okanye ingalo ethe tyaba) yesilingi yokusebenza. ...